Amakhowe adliwayo: amakhowe zamanga
Amakhowe omunye othandekayo kakhulu futhi ethandwa phakathi baseRussia isikhunta, bajwayele ekulungiseleleni izitsha eziningi, noma usebenzise njengendlela dish ehlukile ngesimo nosawoti. ezithakazelisayo kakhulu ukuthi kwezinye izifundazwe eziningi mazwe ulinganiswa amakhowe futhi toadstools awacatshangwa ezidliwayo.
Namuhla, kukhona inani elikhulu izinhlobonhlobo ubisi amakhowe. Olunye uhlobo esinjalo agaric zamanga. Amanga bebizwa ngoba basuke ukubukeka efana ezivamile futhi ajwayelekile kubo bonke amakhowe, kodwa ngesikhathi ukukhula ukhunta ngaphakathi uginindela zenzeka uncharacteristic Gruzdev ndaba elula. Kuyinto ngenxa yokuba khona kwalezi izinto kubantu, lezi amakhowe ngokuthi "amakhowe zamanga."
Ukuhlukanisa kubo kusukela evamile Gruzdev omhlophe kungenzeka, uma ucindezela kancane ku nesigqoko sakhe. Lapho sicindezelwe, yena ethambile okuningi "wangempela" umlingani wakhe, njengokungathi ucindezele nzima ke kusukela ngaphansi bonnet avuze amaconsi ambalwa ketshezi Milky. Njengoba amakhowe zamanga ingaze uma ukwa zabo: ukwa futhi ukuthi uketshezi olufanayo emhlophe.
Naphezu isihloko ezingabazisayo, amakhowe zamanga ezidliwayo, nakuba lokhu uhlala ungaqiniseki. Iqiniso liwukuthi kusuka mushroom evamile ihlukanisa mhlophe kuphela ketshezi izidakamizwa eziqukethwe uginindela. Uma nidla lesi amakhowe, ngeke kuholele ekufeni noma ukusangana, kodwa kungenzeka ukuthi maduzane Umuntu owayedla leli khowe kufanele uchithe e igumbi lokuzisiza. Lokhu ndaba ezimhlophe kungabangela ukuhlanza ezinzima kanye nesifo sohudo. Yingakho kusukela uju ezinjalo kumele abalahliwe, ikakhulukazi uma umuntu has izinkinga nge esiswini sakhe.
Gruzdev isigqoko lokhu akulona nje brown, noboya obudaywe baba nsomi noma tint okwesibhakabhaka. Uma ngabe le isigqoko push kancane, kuyoba soft kakhulu futhi, mhlawumbe, ngaphakathi uzoqala owehlela, njengoba kushiwo ngenhla, uketshezi ukukhanya kokuba iphunga eyethile kakhukhunathi. Ubukhulu we ukhunta ngokuvamile isukela ezine kuya kweziyisishiyagalombili ngamasentimitha. Umumo izigqoko, ngokuvamile flat, kodwa ngezinye izikhathi kungaba kancane ngilugweda ngaphakathi. Njengoba ukukhula ukhunta esiqwini kungabonwa uginindela ngokubomvu, wakhipha iphunga eyethile kakhukhunathi. Lapho iphutha isigqoko ngokushesha kakhulu iba amnyama noma ngisho black.
Ngaphambi obheke aphume ehlathini kusesho amakhowe, qinisekisa ukubheka isithombe okubonakalayo zonke izinhlobo, engatholwa emahlathini langakini, le nqubo elula uzokusindisa kusukela izinkathazo eziningi. Kufanele uhlole ngokucophelela nomhlophe agaric amanga, ngoba ukubonakala kunzima ukuhlukanisa kusuka abajwayelekile, kodwa ukuqinisekisa ubuqiniso bayo kungaba ngendlela efanayo - a ingcindezi kancane ku-bonnet, uma kuba soft, futhi kusukela uqala ezimhloshana eziyinhlaka juice mhlophe, khona-ke ukhubeke ku agaric zamanga. Ukhule amakhowe ngokuvamile "imihlambi" ezinkulu, ngamunye ngamunye ezingajwayelekile kakhulu. Hlangana amakhowe zamanga ngangokunokwenzeka i sehlozi kuyo, kanye ezivulekile. Lezi amakhowe linesizotha emvelweni. Thola lokhu ukhunta ungenziwa kuphela iwe.
Izimpondo inyamazane (bheka isithombe). izimpondo Kungani inyamazane? Lapho reindeer elachithwa izimpondo zenyamazane zabo?
Cormorant - Lake Ichthyophagi
Garden silo ikhilikithi - luma ashwabadele!
Motyl - kabani isibungu? ukuthuthukiswa lolo
Gel "Sanita": Ukwakheka kanye nokubuyekeza